YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, March 04
သောကောင်လေးက''I just visit to Canada."ဟုရဲရင့်ကိုပြောသည်။ကွိဘက်၏အနောက်ဖက်တွင်ရဲရင့်တို့
ချက်ပေါ်မှာမူတည်နေပါတယ်ကွာ....''၊.........''Sir...We are closing now..''Emm..What time is it?"'
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/04/20092အကြံပြုခြင်း
အားမေးကြည့်ရာ “မဖြစ်ပါဘူး။လုံလုံခြုံခြုံဝတ်လဲ တဏှာထတဲ့လူကထတာပါဘဲ။ကားပေါ်တွေ
မှာကြည့်ပါလား။မမြင်ရလေ သူတို့ကပိုကြည့်ချင်လေဘဲ။ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ထမီကမှအလွယ်
After bombs explode in Rangoon
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/04/20090အကြံပြုခြင်း
မြေနီကုန်းနှင့် လှည်းတန်း ဖေါက်ခွဲမှုသည် နအဖအာဏာရှင်အား တိုက်ပွဲခေါ်သံဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုမှ ကြေညာ။
ကျောင်းသားတွေကို ကျောင်းစာသာလိုက်စားရမည်ဟု ဗမာပြည်၏ကိုလိုနီအစိုးရများနှင့် ၄၈ ခုနှစ် ဒီဖက်ပိုင်းအစိုးရများက တွင်တွင်ပြော ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသားများကို စာသင်ခန်းများ၊ ကျောင်းပရဝုဏ်များအတွင်း ပိတ်လှောင်ထားရန်လည်း သူတို့က အစဉ်ကြိုးပမ်းခဲ့ကြ သည်။ ကျောင်းသားများကို အပြင်လောကနှင့်ဖြတ်တောက်ထားရေးမှာ သူတို့၏ကျောင်းသားရေးရာ ပေါ်လစီများတွင် ထိပ်ဆုံးကပါဝင် သော အချက်တချက် ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်ဗမာနိုင်ငံ၏ သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်သောအခါ ကျောင်းသားများသည် ကျောင်းသားအရေးများသာမက ပြည်သူ့အရေး၊ ကမ္ဘာ့ အရေးများကို တောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြကြောင်း၊ ကျောင်းပရဝုဏ်များထဲတွင်သာမက လမ်းမများပေါ်၊ တောကြိုတောင်ကြားများပါ မကျန် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြကြောင်းလည်းတွေ့ရပေသည်။ ကလောင်လက်နက်၊ ပိုစတာလက်နက်၊ ဂျင်ဂလိလက်နက်၊ နောက်ဆုံး တကယ့် ကျည်ဆံထွက်သော လက်နက်များကိုပင် ကိုင်စွဲကာတိုက်ခဲ့ကြကြောင်းကိုလည်းတွေ့ကြရပါသည်။
ဤအချက်များကပြသနေသည်မှာ ဗမာပြည်လိုဖိနှိပ်မှုဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံနေသည့် နိုင်ငံတခုတွင် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကိုယ့်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ဘယ်တော့မှအချုပ်အချယ်မခံဘူးဆိုခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့သောထင်သာမြင်သာ သာဓကများရှိနေသည့် အကြားမှပင် အချို့သောသူများသည် အမျိုးသမီးလှုပ်ရှားမှုကို အမျိုးသမီးရေးရာကိစ္စသက်သက်တွင်သာ ကန့်သတ်ထားလိုခြင်း၊ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကိုလည်း ကျောင်းသားရေးရာကိစ္စများ သက်သက်တွင်သာကန့်သတ်ထားလိုခြင်းများ မြင်တွေ့နေရပါသည်။
ဖိနှိပ်သူအစိုးရများ၏ နောက်စိုးရိမ်ချက်တခုမှာ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို အခြားအဖိနှိပ်ခံလူ့အလွှာအသီးသီး၏ လှုပ်ရှားမှုများနှင့် ဆက် စပ်မိမှာကိုဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်နှင့်တဆက်တည်း အခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သက်မှာကိုလည်း သူတို့က အလွန်စိုးရိမ်ကြ သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် သူတို့သည် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတရပ်က အခြားသောအလွှာများ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့်ဆက်စပ်ခြင်းကို အင်မတန်ကြီးမားသည့်အပြစ်ကြီးတခုသဖွယ် လက်ညှိုးထိုးပြခြင်း၊ အပြစ်ရှာခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ ကျောင်းသားတွေ နိုင်ငံရေးအမြင် ကျယ်မှာ၊ ကိစ္စအဝဝကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားလာတတ်မှာကို သူတို့စိုးရိမ်ကြသည်။ ကျောင်းသားလောကထဲကို ဗကပတွေထိုး ဖောက်ဝင်နေတယ်ဆိုသော စကားမျိုးဖြင့် ခြောက်လှန့်ခြင်းမျိုးကို ဟိုအရင်အစောကြီး ကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီဖက်ခေတ် သမိုင်းတလျှောက် ထောက်လှမ်းရေးဝါဒဖြန့်ချက်မှန်သမျှလိုလိုတွင် ဤခြေထိုးမှုမျိုးတွေ တွေ့ရပါသည်။ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် ယင်း စကားမျိုးကြောင့် ရှိန်သွားကြသူများလည်း ရှိသလောက်ရှိကြသည်။ တခါတလေတော့ “သန့်ရှင်းသောကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှု”ကို စိတ်ကူးယဉ်သူများလည်းရှိခဲ့သလို အချို့ကတော့လည်း နိုင်ငံရေးပါတီများအပေါ် အာဃာတများထားရှိကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကိုယ့် တိုက်ပွဲ အရှိန်မြင့်နေချိန်၊ ကိုယ့်တဦးတည်းလုံ့လဖြင့်အောင်ပွဲရတော့မည်ဟု ထင်မှတ်ရချိန်၊ သို့မဟုတ်အလွန်ကျဆင်းနေချိန်တို့တွင် ဤတွေးခေါ်မှုမျိုးပေါ်တတ်သည်။ သို့သော် လက်တွေ့တိုက်ပွဲမုန်တိုင်းများက ဤစိတ်ကူးများကိုလွင့်စင်သွားအောင် ကြမ်းတမ်းခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းသားများသည် အခြားအင်အားစုများနှင့်လက်တွဲနိုင်မှ တကယ်မိုးပြိုမြေသိမ့်စေနိုင်သော လှုပ်ရှားမှုများဆင်နွှဲနိုင်ကြောင်းကို ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးက ပြသခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျောင်းသားအရေးကို ဖြေရှင်းလိုလျှင် ပြည်သူလူထုကြီးနှင့်ရော အခြားနိုင်ငံရေးအင်အားစုများနှင့်ပါ လက်တွဲမှဖြစ်မည် ဆိုခြင်းမှာ ဗမာပြည်နိုင်ငံရေးသမိုင်း၏သင်ကြားချက်တရပ်ဟု ယူဆရပါမည်။ မနည်းသည့် တန်ဘိုးများပေးပြီး ရထားသည့် သင်ခန်းစာ လည်းဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ကာလပြဿနာများကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုလျှင် ကျောင်းသားများအဖို့ ကျောင်းကသင်ပေးသော အသိ ပညာလောက်နှင့်မျှ မလုံလောက်တော့။ ပြည်တွင်းပြည်ပ အခြေအနေတွေ၊ သမိုင်းတွေ၊ အယူအဆ အမျိုးမျိုးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး လေ့လာလိုက်စားရန်လိုပါသည်။
စစ်တပ်တတပ်အနေဖြင့် မိမိ၏လှုပ်ရှားမှုဂွင်ကိုဖြစ်စေ၊ အသုံးပြုမည့်လက်နက်ကိုဖြစ်စေ ကန့်သတ်ခဲ့လျှင် ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးရာသာ ကျပေလိမ့်မည်။ ထို့အတူကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုသည်လည်း မိမိလှုပ်ရှားမည့်နယ်ပယ်ကိုဖြစ်စေ၊ လှုပ်ရှားတိုက်ပွဲဝင်မည့် နည်းနာကို ဖြစ်စေ ကန့်သတ်ထား၍မဖြစ်ပေ။ ကျောင်းသားသည် ကျောင်းသားအရေးကိုသာတောင်းဆိုမည်၊ ကျောင်းသားသည် ကျောင်းသား နိုင်ငံရေးကိုသာ လုပ်မည်ဆိုသည် စကားမျိုးများဖြင့် ကျွံနေအောင်ပြောဆိုထားတာ၊ ကြေညာထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ပေ။ အင်မတန် အပြောင်းအလဲမြန်သော ယနေ့ခေတ်၊ ယနေ့ကမ္ဘာကြီးတွင် အင်မတန်ပျော့ပြောင်း၍ လှုပ်ရှားလို့ကောင်းသော သေနင်္ဂဗျူဟာတွေ၊ နည်းပရိယာယ်တွေချမှတ်ထားရန်လိုပါသည်။ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ တုတ်နှောင်ရာကျမည့် အယူအဆများကိုလည်း တင်ကြို၍ ချေဖျက်ထား သင့်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ တိုက်ပွဲ၏ဦးတည်ချက်နှင့် မိမိမဟာမိတ်ဖွဲ့ရမည့်အင်အားတို့ကို ရှင်းလင်းအောင်သိထားဖို့သာ ဖြစ်ပါ သည်။
Wednesday, 04 March 2009 19:18 ရန်ကုန်သားတာတေ
ချင်းမိုင်မြို့၊ ဒွိုင်ဆူထေ့တောင်ပေါ်မှ အရိပ်ကောင်းသော သစ်ပင်ကြီးအောက်တွင် အေးအေးချမ်းချမ်း အနားယူ ငိုက်မျဉ်းနေသည့် ဦးရုက္ခစိုးတယောက် ရုတ်တရက် ခုန်ထကာ အလန့်တကြား အော်လိုက်သည်။
အဘယ်ကြောင့် ဟူမူကား သူ့ရှေ့တွင် ရုတ်တရက်ပေါ်လာသော ကြွက်စုတ်နှင့်အတူ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် ချာတိတ်များကဲ့သို့ ခုန်ဆွခုန်ဆွ လုပ်ရင်း လက်များကလည်း ဟိုယမ်းသည်ယမ်းဖြစ်နေသည့် အသက်ကြီးကြီး လူတယောက်ကို တွေ့လိုက် ရသောကြောင့်ဖြစ်၏။
ကြွက်စုတ်။ ။ တွေ့ရတာ ဝမ်းသာလိုက်တာ ဦးရုက္ခစိုးကြီးရယ်၊ လာသာ လာရတယ် ရှိမှ ရှိပါ့မလားလို့။
ရုက္ခစိုး။ ။ ရှိပါတယ်ကွ၊ ငါ ဘယ်မှ မသွားပါဘူး။ ဒါနဲ့ မင်းဘေးက ခုန်ဆွ၊ ခုန်ဆွကြီးက ဘယ်သူလည်းကွ။ သူ့မြင်ရတာ ငါလို နတ်တောင် ရင်တုန်ပန်းတုန် ဖြစ်တယ်။
ကြွက်စုတ်။ ။ မကြောက်ပါနဲ့ဗျာ၊ သူက ဦးကြွတက်တဲ့။ ဦးရုက္ခစိုးနဲ့ တွေ့ချင်လွန်းလို့ တကူးတက လိုက်လာတာ။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟုတ်လား နာမည်နဲ့လူ လိုက်ပါ့ကွာ။ ဒါနဲ့ သူက ဟစ်ပ်ဟော့ပ် အဆိုတော်လား။ ဒီအသက် ဒီအရွယ်ကြီးနဲ့ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် ဆိုရတယ်လို့။ အရမ်း အရမ်းကို မြောက်ကြွမြောက်ကြွ ဖြစ်နေတာနော်။
ကြွက်စုတ်။ ။ ပေါက်ကရက ပြောတော့မယ်။ ဟစ်ပ်ဟော့ပ် အဆိုတော် မဟုတ်ဘူးဗျ။ သူက မြောက်ကြွဆို ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ အရမ်း အရမ်းကို ကြွတက် … အဲ … တက်ကြွနေလို့။
ဦးရုက္ခစိုး နှင့် ဦးကြွတက်တို့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရာတွင် အငြိမ်မနေသော ဦးကြွတက်ကြောင့် ဦးရုက္ခစိုးပါ သူနှင့် အလိုက်သင့် ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ လုပ်လိုက်မှ အဆင်ပြေသွားသည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြွတက်နေတယ်ဟုတ်လား။ မုန့်ဆီကြော်က ဘယ်နားနေမှန်းမသိ နှုတ်ခမ်းနာနဲ့ တည့်ပါ့မလား ဆိုသလိုတော့ ဖြစ်နေပြီထင်တယ်။ ရှေ့နှစ်ထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲက တကယ် လုပ်ဖြစ်မှာ မို့လို့လား။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေတောင် ခုချိန်ထိ ထွက်မလာသေးဘဲနဲ့။
ဦးကြွတက်။ ။ ဥပဒေ မထုတ်သေးတာက ဗေဒင်ဆရာက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကို အခါမပေးသေးလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ကြွက်စုတ်။ ။ ကြည့်ရတာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကိုချုပ်ထားတဲ့ အမေကြိုင်က ဗေဒင်ဆရာကို အခါမပေးနဲ့ဦးဆိုပြီး အမိန့်ပေးထားတာပဲ ဖြစ်မယ်။ ရှေ့နှစ်ထဲမှာလုပ်မယ်ဆိုရင် အခု ကြေညာရတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလား။
ရုက္ခစိုး။ ။ အဲဒါမှ ဒုက္ခပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲကို အရမ်းအရမ်း ဝင်ချင်နေတဲ့သူတွေ သနားပါတယ်။ ဒီလူတွေထဲမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်းသံကြားရင် ထ မကဘဲ မနေနိုင်တဲ့သူတွေ အများကြီးပါတယ်ကွ။
ကြွက်စုတ်။ ။ အင်း အမတ်ရူးတွေ၊ အမတ်ခရေဇီတွေပေါ့လေ .. ။
ဦးကြွတက်။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ထ က .. အဲလေ ယောင်လို့၊ ကျနော်လည်း အမှန်ကို ဝန်ခံရရင် အမတ်ရူးတွေထဲ တဦးအပါအဝင်ပါ။
ဦးကြွတက်က ချာတိတ်တွေ ဟစ်ပ်ဟော့ပ်ဆိုသလို လက်နှစ်ချောင်းကို ရှေ့ကိုဆန့်ကာ ခြေနှစ်ချောင်းကို ပိုလီယို ရောဂါသည်ပုံစံ ကွေးကောက်၍ ပြောလိုက်သည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဒီဘက်က နိုင်ငံရေးသမား တချို့ကတော့ အထဲပြန်ဝင်မယ်၊ မဝင်ဘူး ကွဲပြဲကုန်ကြပြီ။ မဲဆောက်က လူတွေကတော့ ဝင်မယ့်ကောင်တွေ လာရဲလာကြည့် လေးခွနဲ့ ချောင်းပစ်မယ်တဲ့ဗျ။ ဒီဘက်က လူတွေကလည်း ဂျင်ကလိတွေဘာတွေ ဆောင်ပြီးမှ မဲဆောက်ကို သွားရဲတော့မှာ။
ဦးကြွတက်။ ။ အောင်မယ်လေး၊ အောင်မယ်လေး … ပွဲက ကြမ်းလှချည်လားဗျာ။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဦးရုက္ခစိုးလည်း အထဲပြန်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပါလား။ “ကျုပ်ကိုမဲထည့်ကြပါ၊ ကျုပ်အနိုင်ရရင် မဲထည့်တဲ့သူတွေကို နှလုံးဂဏန်း ဒဲ့ (တည့်) ပေးမယ်၊ ဘောလုံးပွဲ Focus အတိအကျပေးမယ်” လို့သာ ပြောပြီး စည်းရုံးဗျာ၊ ဦးရုက္ခစိုးပုံနဲ့ဆို လူတွေက ယုံပြီး မဲထည့်ကြမှာ။
ရုက္ခစိုး။ ။ မဖြစ်ဘူးကွ၊ တော်ကြာ မဲအပြတ်အသတ်နဲ့ နိုင်သွားလို့ အာဏာလွှဲမပေးဘဲ ထောင်ထဲ ထည့်နေ မှဖြင့် ရုက္ခစိုးတို့ သမိုင်းမှာ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းတွေ ဖြစ်ကုန်ပါ့မယ်ကွယ်။ ဒါနဲ့ ဦးကြွတက်ရဲ့ လာရင်းကိစ္စက ဘာလဲ။
ကြွက်စုတ်။ ။ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအတွက် ဦးရုက္ခစိုးဆီက အကြံလေးဘာလေး တောင်းချင်လို့တဲ့။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဦးကြွတက်က ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေဘာတွေ ထောင်ဖို့ ပြင်နေပြီလား။
ဦးကြွတက်။ ။ ကျနော်ကတော့ ပါတီရယ် ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အဓိကက အမတ်ဖြစ်ရင် ပြီးတာပါပဲ။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟား .. ရည်ရွယ်ချက် တယ်ကြီးတာပဲ။ ဒီလိုလုပ်ဗျာ။ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးပါတီထောင်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ မကြားဘူးလား၊ အဲဒီပါတီကို ဝင်ပေါ့၊ အဲဒီပါတီကလူတွေပဲ အနိုင်ရအောင် အစိုးရက လုပ်ပေးမှာ ပဲဟာ။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဟာ ဦးရုက္ခစိုးကလည်း .. သေချာပေါက် မဲရမယ့်နည်းရှိပါတယ်ဗျ။ မြန်မာပြည်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ၈ သိန်းကျော် ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီလူတွေကို မဲသာထည့်ပါ အမတ်ဖြစ်ရင် မှတ်ပုံတင်ရအောင် လုပ်ပေးပါ့မယ် လို့သာ ပြောလိုက်၊ အိုကေပဲ။
ကြွက်စုတ် စကားအဆုံးတွင် ဦးကြွတက်၏ ဦးခေါင်းထက်၌ မီးတချက် ထပွင့်သွားသည်ကို ဦးရုက္ခစိုး မြင်ဖြစ်အောင် မြင်လိုက်သည် (မှတ်ချက်။ ။ ဦးရုက္ခစိုးက နတ်ဖြစ်နေသောကြောင့် မြင်ရခြင်းဖြစ်၏)
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟေ့ဟေ့ .. နေဦး ကြွက်စုတ်။ မင်းက .. မင်းထုံးစံအတိုင်း ပရမ်းပတာ အကြံပေးတာ အရေးမကြီးဘူး။ ပေါက်ကရတွေ ဖြစ်ကုန်မယ်။
ဦးကြွတက်။ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ ဒီအကြံကောင်းသားပဲ။ တိုင်းရင်းသား ၁၃၅ မျိုးကနေ ၁၃၆ မျိုး ဖြစ်သွား ရုံလေးကတော့ အစိုးရကလည်း ဘာမှ ပြောမယ် မထင်ပါဘူးဗျာ။
ရုက္ခစိုး။ ။ အဲဒါခက်တာပေါ့ .. ၁၃၅ ဆိုတာ ပေါင်းရင် ၉ ဂဏန်းမဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒါကြောင့် အစိုးရက အဲဒီ ကိန်းဂဏန်းကို ထိန်းထားတာ။ ၁၃၆ အဖြစ်ခံမှာကို မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားထဲ ပေးမပါတာ။ တခြား ဘာမှ မဟုတ်ဘူး။
ဦးကြွတက်။ ။ ဦးရုက္ခစိုး ပြောတော့လည်း ဟုတ်သလိုလိုပါလား။ လုပ်ပါဦးဗျာ။ တခြားအကြံပေးပါဦး။ ကျုပ်က အမတ်ပိုး အတော်ထနေပြီ။
ဦးကြွတက်တယောက် တက်ကြွစွာပြောရင်း အရှိန်လွန်ကာ ပါးစပ်ပါ ရွဲ့စောင်းသွားသည်။ တံတွေးများ ထွက်ကျ လာသောကြောင့် ဦးရုက္ခစိုး ရှောင်လိုက်ရသည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ နေပါဦးဗျ .. ခင်ဗျားက နိုင်ငံရေးကိုအတော် သွားရည်ကျ .. အဲ .. စိတ်ဝင်စားတယ်ထင်တယ် ဟုတ်လား။
ဦးကြွတက်။ ။ ဟီးဟီး .. နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေ စိတ်ဝင်စားလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ နားလည်လား ဆိုရင်တော့ တလုံးမှ နားမလည်ပါဘူး။ အဓိကက လူကြီးလုပ်ချင်တာ။ လူကြီးဖြစ်တော့လည်း စီးပွားရေးလေး ဘာလေး လုပ်လို့ ကောင်းတာပေါ့ဗျာ။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဟား ခက်တာပဲ။ ခင်ဗျားတို့က ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်းသံကြားရင် မနေနိုင်မထိုင်နိုင် ထကဖို့ပဲ သိတာ။ ၁၉၉ဝ ကို ပြန်ကြည့်စမ်း၊ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာနဲ့ အရွေးခံရသူတွေ ထောင်ထဲ တန်းဝင်သွားရတာလေ။
ဦးကြွတက်။ ။ ဒါတော့ ဒါပေါ့ဗျာ… အဲ … ဒါပေမယ့်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဒါပေမယ့် မနေနဲ့။ ရှေ့နှစ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်လည်း အဲဒီလို မဖြစ်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ အာမ မခံနိုင်ဘူး။ လူကြီးလုပ်ချင်ရင် ကလေးတွေနဲ့ပေါင်း၊ ချမ်းသာချင်ရင်တော့ ဘိန်းလေးဘာလေးကုန်ကူး အဲဒါက သေချာတယ်။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဦးရုက္ခစိုးလိုပေါ့။ သူက ကျုပ်တို့လို လူငယ်တွေနဲ့ပေါင်းနေတော့ အလိုလို လူကြီးဖြစ် နေတာ။ ရွေးကောက်ပွဲတောင် တကူးတက ဝင်စရာမလိုဘူး။
ရုက္ခစိုး။ ။ နေစမ်းပါဦး ကြွက်စုတ်ရာ၊ ဒီဆေးရိုးသည်က တမှောင့်။ ကဲ ဦးကြွတက်ကို ကျုပ် မေးမယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့လက အကျဉ်းသား ၆ဝဝဝ ကျော် လွှတ်ပေးတဲ့အထဲမှာ နိုင်ငံရေးသမား ဘယ်နှယောက် ပါသလဲ။
ခုဏက ဟောက်ထားသဖြင့် အသံမကျယ်ရဲတော့သော ကြွက်စုတ်က “အယောက် ၂ဝ ကျော် လို့ ကျနော် ကြားလိုက်သလိုပဲ” ဟု ခပ်တိုးတိုး ဝင်ဖြေသည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ကဲ … တွေ့တယ်မဟုတ်လား၊ ဒီ အကျဉ်းသား ၆ဝဝဝ ကျော်ထဲမှာ နိုင်ငံရေးသမား အယောက် ၂ဝ ကျော်ပဲပါတယ် တဲ့။ အဲဒါကြောင့် ကျုပ်ပြောတာပေါ့ ရွေးကောက်ပွဲ အရူးထပြီး ထောင်ကျရင် လွတ်လမ်း သိပ်မရှိဘူး။ ဘိန်းရောင်းဝယ်တာက သူဋ္ဌေးလည်းဖြစ်မယ်၊ အဖမ်းခံရလည်း ခဏပဲ၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်က သေချာပေါက် ရောက်လာမှာ။ စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ ဦးကြွတက်ရေ … ။
ဦးကြွတက်။ ။ ဦးရုက္ခစိုးပြောတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ပိုးက ထိန်းမရတော့ဘူး ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
ဦးကြွတက် ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ လုပ်ရင်း ပြောနေပြန်ရာ ဦးရုက္ခစိုးပါ ယောင်၍ ခုန်ဆွ ခုန်ဆွ ဖြစ်သွားသည်။ ဦးရုက္ခစိုးမှာ သူ့ကိုယ်သူ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေမှန်း မသိပေ။ အမှန်က ဦးကြွတက်ထံမှ အမတ်ဖြစ်ချင်သည့် ပိုးများ ဦးရုက္ခစိုးထံ ကူးစက်နေပြီဖြစ်သည်။
ဦးရုက္ခစိုး။ ။ ဟ .. ဟ .. လုပ်ပါဦးကြွက်စုတ်ရေ။ သူ့ပိုးက ဗိုင်းရပ်စ်လိုပဲ ကူးတတ်တယ် ထင်တယ်။ ငါလည်း မနေနိုင်တော့ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ချင်လာပြီ။ အမတ်ဖြစ်ချင်လာပြီဟ။ ပြန်မယ်၊ ပြန်မယ်၊ ပြန်တော့မယ်၊ အမတ်လုပ်မယ်၊ လူကြီးလုပ်မယ်။
ပြောရင်းဆိုရင်းက ဦးရုက္ခစိုးတယောက် သူ့ ထန်းခေါက်ဖာစုတ်ကြီးကိုချကာ နတ်ဝတ်နတ်စားများ ထည့်၍ ပြည်တော်ဝင်သီချင်းကို အသံပြာကြီးနှင့် ဟစ်ဆိုနေလေတော့သည်။
ဦးရုက္ခစိုး။ ။ အသည်းစွဲချစ်မိတ်ဆွေ .. ခေတ္တခွဲလို့နေ .. တူနယ် .. တယ်နယ် .. ကျုပ်တို့နဲ့ တူတကွ .. အမတ်ဖြစ်နိုင်စေ .. အောင်စည်ရွမ်းသံ ကြားရင်ဖြင့် .. ပြည်တော် ဝင်မယ်လေ .. ။ ။